Kulan dhexmarey Madaxweyne Xasan iyo Xildhibaanada iyo Wasiirada Digil iyo Mirifle oo Fashil ku dhamaadey – idalenews.com
Kulan dhexmarey Madaxweyne Xasan iyo Xildhibaanada iyo Wasiirada Digil iyo Mirifle oo Fashil ku dhamaadey
Waxaa Madaxtooyada dowlada Federaalka Soomaaliya ka dhacey shir ay isugu yimaadeen inta badan xubnaha xildhibaanada beelaha Digil iyo Mirifle ugu jira dowlada Federaalka iy oo gaaraaya ku dhowaad 50 xildhibaan iyo Madaxweynaha dowlada Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud kaasoo beelaha Digil iyo Mirifle ay kaga dalbanaayaan Madaxweynaha iyo xukuumadiisa inay ka laabtaan go’aankii magacaabista Taliska Ciidanka Booliiska Soomaaliyeed iyo Taliska Sare ee Nabad Sugida Qaranka.
Gudoomiyaha Golaha Shacabka Soomaaliya oo isugu kulankaas ku wehliyey xildhibaanada Digil iyo Mirifle ayaa isaga ku wargeliyey xildhibaanada in Madaxweynuhu ku deg degay isla markaasna gudoomiyuhu uusan arrinkaas aan lagu soo wargelin, sidaas darteed sheegey inuu ku mowqif yahay xildhibaanada Digil iyo Mirifle ee weydiistey madaxweynaha inuu go;aankaas ka noqdo lana ilaaliyo awood qabsiga dowlada ay ku dhisan tahay oo cid welbaa ay wax ku tahay.
Kulanka oo qaatey waqti aad u dheeer xildhibaanadu ku dheeraadeen in madaxweynaha iyo xukuumadiisa ay aad ugu tunteen nidaankii awood qabsiga ee lagu soo heshiisey, ayaa warar lagu kalsoon yahay sheegeen in kulankii maanta uu fashil ku dhamaadey ka dib markii uu madaxweynaha Mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu ka hor yimid isla markaasna diidey baaqii ay xildhibaanada beelaha Digil iyo Mirifle.
Xildhibaanada ka soo jeedo Deegaanada Digil iyo Mirifle ayaa kulankii maanta ay la yeesheen si adag ugu sheegey Madaxweyne Xasan Sheikh in aysan mar dambe u dulqaadan doonin in la duudsiiyo xaquuqdii ay dowlada dhexdeeda ku lahaayeen beelahaas isla markaasna kalsoonida ay u haayaan dowlada Federaalka kala noqon doonaan haddii aan la dhowrin dastuurka dalka iyo nidaanka awood qaybsiga ee uu madaxweynuhu ku yahay astaanka qaranka iyo dowlada Federaalkuna ay ku dhisan tahay.
Dhowaan ayey aheyd markii xukuumada Ra’isul wasaare Saacid ay Taliska Sare ee Ciidanka Booliiska iyo kan Nabad Sugida ay u magacaabeen Generaal Saacid oo ka soo jeeda beelaha Daarood iyo S/Guud Bashiir Goobe oo isna ka soo jeeda beesha 5aad, taasoo si aad ah uga careysiisey beelaha Digil iyo Mirifle oo u arkey in madaxweynuhu mudnaan gaar ah siinaayo beelaha kale ee Soomaaliyeed, isla markaasna xilalkii fara ku tiriska ahaa ee beelahaas loo weeciyo beelo kale.
Howlgal lagu soo qabtay ku dhowaad boqol qof iyo Walxo qarxa oo laga sameeyey magaalada B/weyne + Sawirro
Dhageyso: Shirka Jaraa’id ee Xildhibaanada Digil iyo Mirifle qabteen Kulankii fashilmey ee ay Madaxweynaha la qaateen